7 septambra: tsy azo ihodivirana ny fametraham-pialan-dRajaonarimampianina | NewsMada
7 septambra: tsy azo ihodivirana ny fametraham-pialan-dRajaonarimampianina
Andrasan’ny maro ny fametraham-pialan’ny filoha Rajaonarimampianina, rahafakampitso. Tsy azo ihodivirana…
Andro isaina sisa, rahafakampitso. Tsy azo ihodivirana ny fametraham-pialan’ny filoha Rajaonarimampianina. Izay ny roa volana mialoha ny fifidianana, ny 7 novambra. Noho ny maha kandidà filohan’ny Repoblika azy izay, araka ny And. 46 ao amin’ny lalàmpanorenana. Inona ny olana amin’izany? Arahina fotsiny ny lalàna, dia izay.
Na izany aza, efa nahavalalanina hatramin’ny taon-dasa ny kajikajy sy ny paipaika politika tsy hialana eo amin’ny fitondrana, farafahelany araka izay azo atao. Tamin’izany, notsapatsapaina, ohatra, ny hoe mila manao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana. Tonga hatramin’ny hoe miverina eo amin’ny fitondrana izy, rehefa vita ny fifidianana.
Tahotra fifidianana ny antony
Izany rehetra izany, tahotra fifidianana. Mahavita be ho an’ny vahoaka ve dia fadiranovana hotsarainy amin’ny latsa-bato? Tonga ny farany. Rehefa tsy nahomby ny Hetsika ho fanorenana ifotony (HFI) hanemorana ny fifidianana, anaovana maty farany ny fitoriana eny amin’ny Filankevi-panjakana: tsy ara-dalàna ny fihaikana mpifidy, 90 andro mialoha ny fifidianana, nivoaka ny 29 jona. Tsy nampahafantarina ny besinimaro, hono, fa navoaka avy hatrany tamin’ny gazetim-panjakana, ny 10 jolay.
Nahoana no izao vao nataon’ny kandidà Tabera Randriamanantsoa ny fitoriana? Tokony ho izay, ohatra, no nimasoany, vao nametraka ny firotsahan-kofidina izy. Tsy takona afenina ny kajikajy sy paipaika politika. Eo ny Filankevi-panjakana hanapaka, anio, raha maty paik’andro na tsia ny fitoriana. Mbola ao anatin’ny fanodinkodinan-draharaha ny tsy nivoahan’izany, omaly?
Tapitra ny lalan-kaleha
Tsy hita intsony izay (h)atao? Na izay fitoriana amin’ny Filankevi-panjakana izay no farany… Nidofotra tsy araka izay niheverana azy, ohatra, ny lalàm-pifidianana, notetehina amin’izay mahametimety ny tena. Manampy trotraka ny tsy fahazoan’ny manampahefana manao fampielezan-kevitra, ny mpiray dia tamin’ny tena lasa mpifaninana… hanaparitaka vato. Tsy hahazoana mikofoka firy intsony koa ny mety hanaovana hosoka sy hala-bato toy ny tamin’ny fifidianana kaominaly sy senatorialy, taona 2015, raha mbola eo amin’ny fitondrana?
Izany rehetra izany, mahatonga tahotra sy horohoro amin’ny fiatrehana ny fifidianana: tsy mety ho vokatry ny kisendrasendra ratsy toy ny tamin’ny 2013. Tena hitsara ny vahoaka… nangina sy tsy nihetsika hatramin’izay ela izay. Izay ny mahatonga ny fiadiana fo hampihemotra ny fifidianana? Ho hita eo…